Arabia Saodita : Fahatsiarovana an’i Dr. Ghazi Al Gosaibi · Global Voices teny Malagasy
Arabia Saodita : Fahatsiarovana an'i Dr. Ghazi Al Gosaibi
Voadika ny 25 Aogositra 2010 17:30 GMT
Dr Ghazi Al Gosaibi. Sary avy amin'ny takelaka mpankafy ao amin'ny Facebook.
Arabia Saodita sy Bahrain misaona ny fahalasanan'ny olona manan-tsaina izay nitondra anjara biriky lehibe teo amin'ny lafiny kolontsaina sy ny fampivelarana ny sehatra teo amin'ny firenena roa tonta mifanolo-bodirindrina. Ghazi Al Gosaibi, mpanao tononkalo, mpanoratra, masoivoho sy ministra, maty omaly [15 aogositra] teo amin'ny faha 70 taonany. Mahatsiaro azy ny mpitoraka bilaogy sy mpiserasera tweep amin'ny fanehoana fihetseham-po manerana ny tontolo Arabo.
Mpitondra teny liberaly any Arabia Saodita, Dr. Al Gosaibi nandrato ny fianarany voalohany tany Bahrain, izay misy ny fianakaviany, ary taty aoriana nandritra ny asany dia masoivohon'i Arabia Saodita tany izy.
Avy any UAE, Sultan Al Qassemi miserasera twitter:
Tokony hiteny aho mikasika ny olom-bitsy eo amin'ny fitondrana: toerana tena tsara ny tany Arabo satria teraka tao i Ghazi Al Gosaibi.
Yacoub Al Slaise teratany Bahrainita manampy:
Omaly alina dia niteny tamin'ny namako aho fa amin'izao androntsika izao dia tsy misy modely TENA IZY, diso aho ary nandao antsika izy androany#GHAZI
iLandBahrain mahatsapa fahabangana:
Ghazi Al-Gosaibi – feon'ny fanazavana sy ny fahamarinana- Ho banga tokoa ny toeranao ♥ Andriamanitra anie hitahy ny hatsaram-panahinao
Ary Bint battuta mandalina ny tahiriny:
Ho fahatsiarovana an'i Ghazi Al Gosaibi, soratra taloha tao amin'ny bilaogiko (teny Arabo): ” Ny hatsaran'ny tsy fahafantarana ” http://is.gd/eiC1U
Ny fandrenesana ny nahafatesan'i Gosaibi teo amin'ny pejin'ny mpankafy ao amin'ny Facebook dia nahazoana hafatra maherin'ny 750 fotoana fohy taty aoriana, manerana ny tany.
Hussain Hashem manoratra:
أهدتنا الدنيا عالما عاملا مخلصا لدينه و وطنه
فلم نوفه حقه الا بعد وفاته
حزنتك لفراقك كما لو كنت من أعز أقربائي
Nanome antsika olon'ny siansa sady mpiasa nahatoky teo amin'ny fitiavan-tanindrazana ny firenena – firenena izay nanome rariny azy raha tsy aty aorian'ny fahafatesany.
Ny alaheloko tamin'ny fahalasananao dia mitovy amin'ny fandaozan'ny havako tena akaiky ahy indrindra.
Nora Aboushoushah manampy:
Raha velona ao am-po izay nandao dia tsy maty izy izay..
Ho ao am-poko mandrakariva ianao..
Ny bokinao.. nanome lanja ny fiainako.. nikasika ny foko..nitondra fifaliana lehibe ho ahy.. nanazava ahy.. nampihomehy sady nampitomany ahy.. helped me make sonanampy ahy hanana safidy..
Ilay mpanoratra laharana 1 amiko.. ho velona mandrakizay ianao..
Avy any Arabia Saodita, Crossroads Arabia‘s John Burgess miteny:
Tena nalahelo aho tamin'ny namakiako fa lasa i Ghazi Al Gosaibi. Tsy vitan'ny hoe fantatro izy sady tiako, fa nisolo tena ny karazana fanjakana ofisialy izay tsy fahita firy any Arabia Saodita izy. Ny fitiavany ny tanindrazany sy ny namany Saodiana dia ampy nizarany tamin'ny alalan'ny fitadiavany ny lalana rehetra hahatongavan'ny vehivavy Saodiana tany amin'ny toeram-piasana, nifehy ny fahabetsahan'ny mpiasa tsy teratany, nampihena ny tahan'ny tsy fananana asa izay nahakivy ka nilana vahaolana.
Lasa i Dr. Ghazi Al Gosaibi teo amin'ny faha 70 , ilay mpiasan'ny fanjakana Saodiana izay nitana ny toerana ambony indrindra noho ny olona rehetra araka ny fahalalako ny governemanta sy ny ministra izay voafetra ihany, ny zavatra fantatro dia nokianina noho ny antony izay heveriko fa tsy mitombina, fantatro noho izany fa mahitsy ny lalany.
Vao haingana ny minisitry ny Fampahalalam-baovao Aziz Khoja no nanaisotra ny tsy fahazoan-dalana natao atamin'ny asa sorany sasany, izay nampanontany tena ahy, ahoana no minisitra ao amin'ny fanjakana Saodiana dia mbola misy asa sorany sasany ihany tsy mahazo avoaka eny an-tsena? Azoko antoka fa tsy irery aho mametraka izany fanontaniana izany.
Bougi, mandritra izany, mamaritra an'i Dr. Al Gosaibi ho “anankiray amin'ireo olona tsara fanahy.” Manampy ilay mpitoraka bilaogy:
Amin'ny maha minisitry ny asa azy, nampirisihany ireo tanora tsy an'asa hanao ireo asa navelany hataon'ny vahiny, nanondro ny ezaka nataony tany aminy fony izy mpandroso mofo tao amin'ny trano fisakafoanana tany Jeddah.
Mitovy amin'ny ”9 to 5” , ny asa literatioran'i Dr. Al Gosaibi dia sady misy andiana sombintantara miresaka kolikoly ao an-tokantrano, fahaverezan-jon'ny Arabo ary asa soratra mamakafaka ny fifandraisana eo amin'ny Silamo sy ny Tandrefana. Ny tononkalony no mikasika, lalina ary natao ho an'ny rehetra, mandritra ny dia ety an-tany.
Ain Bhaghzi Kowetiana koa mihetsika ary manoratra:
في الحقيقة المملكة العربية السعودية لم تفقد وزير بل فقدت رجل محنك و مثقف من الطراز الرفيع الذي قلما نجده في مناصب قيادية في البلاد العربية ، هذه مشيئة الله عز وجل، رحل جسد القصيبي وظل فكره في الإدارة و عذوبة أشعاره نتداولها جيل بعد جيل .
Ny marina dia tsy vitan'ny hoe minisitra fotsiny i Al Gosaibi, fa olona manana traikefa sady ambony fahaizana, izay tsy fahita firy eo amin'ny sehatra fitantanana manerana ny tany Arabo. Sitrak'i Allah ny fahafatesany. Tsy ho eto amintsika intsony izy kanefa ny fomba fitantanany sy ny hakanton'ny tononkalony dia hiaraka amintsika eny foana amin'ny taranaka mifandimby.
Manoratra ao amin'ny Angry Arab News Service, Dr Asad Abu Khalil, Libaney Amerikana, mamaritra an'i Dr. Dr Al Gosaibi ho ” mpanoratra sady mpanao tononkalo mahaliana izay namela ny talentany sy ny fahaizany ho an'i Arabia Saodita.”
Hoy koa izy manampy:
Maty ilay masoivoho sady ministra Saodiana ity : nesorina ny tsy fahazoan-dalana napetraka ho an'ny bokiny herinandro vitsivitsy talohan'ny nahafatesany, fony izy teo am-pandriana niandry fahafatesana.
22 Septambra 2021Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana